के हो र कती महत्त्वपूर्ण इकमोबिलिटी | हरियो नवीकरणीय
के हो र ईमोबिलिटी कती महत्त्वपूर्ण छ
ठूला शहरहरूमा बढ्दो प्रदूषण र मौसम परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिंगको गम्भीर प्रभावले शहरहरूलाई उनीहरूको यातायातलाई वातावरणमा कम हानिकारक बनाउन बाध्य तुल्याउँछ। शहरहरूमा प्रदूषक ग्यास उत्सर्जनको स्रोतहरू यातायातबाट आउँछन्। लाखौं सवारी साधनहरू जहिले पनि प्रत्येक समयमा चल्छन्, नागरिक र वातावरणीयले भोग्नु पर्ने परिणाम गम्भीर छ।
यी समस्याहरू कम गर्न ecomobility खडा हुन्छ। यो शहर मा एकीकृत अधिक दिगो गतिशीलता को बारे मा छ पर्यावरण मा यातायात को प्रभाव को कम गर्न। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ ईकमोबिलिटीमा के समावेश हुन्छ र यसका के विशेषताहरू छन्?
1 इकोबिलिटी भनेको के हो?
2 Ecomobility को महत्व
3 समाधान जुन दिगो गतिशीलता प्रस्ताव गर्दछ
4 सर्ट्रान्स र इकमोबिलिटी
इकोबिलिटी भनेको के हो?
माथि उल्लेख गरिए अनुसार ecomobility यातायातमा पर्यावरणीय अवधारणा प्रस्तुत गर्न आवश्यकताबाट उत्पन्न हुन्छ। शहरको गतिशीलता ईन्धनको प्रकार, सडक नेटवर्कहरू, बाइक लेनहरूको उपलब्धता, सार्वजनिक यातायात क्षमता, आदिमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, प्रदूषण कम गर्न उपायहरू समावेश गर्न आवश्यक छ।
इकोबोबिलिटीले ती मिडिया प्रणालीहरूलाई समेट्छ जुन व्यक्ति र चीजहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छ, संरक्षण र प्रकृति र वातावरण संरक्षण। यो स्वस्थ गतिशीलता हामीलाई धेरै टाढाको भविष्यमा जारी राख्न मद्दत गर्दछ निरन्तर प्रदूषण कम गर्दै। दिगो विकासको अवधारणा पनि ecomobility मा प्रवेश गर्दछ। यो आवश्यक छ कि यातायात मा हामी वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछौं भविष्यको पुस्तालाई सम्झौता नगरी तिनीहरूको पूरा गर्न।
इकमोबिबिलीटीलाई टिकाऊ गतिशीलता पनि भनिन्छ। यो तपाईले सुन्नु भएको यो पहिलो पटक होइन। जे होस्, यो सामान्य रूपमा गतिविधिहरु संग भ्रमित हुन्छ हिड्दै, सार्वजनिक यातायात वा साइकल चलाएर। यो सत्य हो कि यी तीन कार्यहरूले प्रदूषण कम गर्न मद्दत गर्छन् र दिगो गतिशीलता हुन्। तर ecomobility मात्र होइन। यो यातायात को कम प्रदूषणकारी साधन र एक सडक नेटवर्क को एक संयोजन हो जुन ट्रान्जिट सुविधा पुर्‍याउँछ।
Ecomobility को महत्व
यो महत्वपूर्ण छ कि यदि शहर प्रदूषणबाट अकाल मृत्युलाई जोगाउन चाहन्छौं भने शहर यातायात टिकाऊ हो। वायु प्रदूषण एक मौन एजेन्ट हो भनिन्छ जुन मानिसहरूलाई मार्न जिम्मेवार छ। अरु के छ त, दम, एलर्जीको घटना बढाउँदछ र अन्य श्वसन र हृदय समस्याहरू। यस कारणका लागि, हाम्रो यातायात सम्भव धेरै इकोलोजिकल हुनुपर्दछ।
हरेक दिन ईकमोबिलिटीले समाजमा अधिक वजन बढाउँदैछ। यो देख्न धेरै सामान्य छ कि व्यक्तिले उनीहरूलाई कसरी नाम दिए र यो शब्दावलीको एक भाग हो। हाम्रो यातायात द्वारा छोडियो पर्यावरणीय पदचिह्न हरेक वर्ष बढ्छ। व्यक्तिगत स्तरमा यसको कुनै अर्थ हुँदैन, तर विश्वव्यापी रूपमा हामीमध्ये धेरै छन्।
प्रदूषक ईन्धनको आवश्यक पर्दछ कार र अन्य सवारी साधनहरूको प्रयोग धेरै बारम्बार हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिगत वाहन दिनको वातावरणमा टन CO2 को उत्सर्जन गर्दछ। थप रूपमा, हामीले सामानको ढुवानीलाई विचार गर्नुपर्छ। यद्यपि यो अर्थव्यवस्था र वृद्धिसँग जोडिएको छ (रोजगारी सिर्जना गरेर), यो एकदम प्रदूषक क्षेत्र हो। यो यातायातका यी शाखाहरूमा जहाँ कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ जहाँ ecomobility लाई मद्दत गर्दछ।
इकोभबिलिटीको महत्त्व शहरहरूमा हावाको गुणस्तर र स्वास्थ्य सुधार गर्न आवश्यकतामा पर्दछ। शहरहरूमा प्रदूषण फैलाउने ग्यासको लगभग %०% व्यावसायिक यातायातबाट आउँछन्।
के सोचेको जस्तो छैन, सवारी साधनहरूको प्रयोगले प्रदूषण गर्छ कि न केवल वातावरण वा स्वास्थ्य लाई प्रभावित गर्दछ, तर आर्थिक र सामाजिक रूप मा। यो दुर्घटना दरमा वृद्धि, असमानता र प्रतिस्पर्धाको नोक्सानीको कारण चलनमा सवारी साधनको अधिकताका कारण हो।
समाधान जुन दिगो गतिशीलता प्रस्ताव गर्दछ
दिगो गतिशीलता साइकल, बस चढ्ने वा हिड्नेको बारेमा मात्र होईन। यो अधिक दिगो बनाउन विभिन्न समाधानहरूको प्रस्ताव गर्ने बारेमा हो। त्यसोभए तपाईले एउटा उदाहरण देख्न सक्नुहुनेछ, क at्ग्रेसमा यो भनिएको थियो कि 3,5. meter मिटर चौडा सडकमा २ घण्टामा २,००० व्यक्ति कारबाट जान सक्दछन्। यदि तिनीहरू साइकल चालक हुन्, १ 2.000,०००; पैदल यात्रीहरू, १ ,1, ०००; हल्का रेल द्वारा, २२,००० र बसमा, ,43.000 XNUMX,०००। र मेट्रोबाट धेरै बढि, जुन बस भन्दा कम प्रदूषण गर्दछ।
यो पर्याप्त यातायात रोज्ने कुरा होइन, तर समान सडकमा यात्रा गर्न सक्ने व्यक्तिको संख्याको मूल्यांकन गर्ने कुरा हो। यदि हामी अधिक व्यक्तिहरूको लागि सक्षम सवारी रोज्यौं भने, हामी प्रदूषणलाई घटाउँदै हुनेछौं।
ई-कमबिलिटी द्वारा सम्पन्न केहि कार्यहरू हुन्:
धेरै शहरहरूमा सार्वजनिक साइकल प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्।
निजी भन्दा सार्वजनिक यातायात प्राथमिकता।
पैदल यात्री क्षेत्रहरू बढाउनुहोस्।
शहरको केहि भागहरूमा कारहरूको प्रवेश प्रतिबन्धित गर्नुहोस्।
कार प्रयोग गरेको खण्डमा, सम्भव अधिकतम ओप्यान्सीको साथ गर्नुहोस्।
दिगो गतिशीलतामा ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को कारक सडकहरूको सजावट हो। रेलहरू त्यस्तै ठाउँमा अवस्थित हुनुपर्छ यात्रा गर्नका लागि दूरीहरू र ट्राफिक जाम न्यून छ। यो प्रमाणित छ कि ट्राफिक जाम सडक यातायात भन्दा बढी प्रदूषण गर्दछ।
अर्कोतर्फ, ईन्धन कम प्रदूषणकारी र शून्य उत्सर्जनको साथ सवारी साधनहरूको परिचयलाई निकट प्राथमिकताको रूपमा हेरिन्छ। हामी इलेक्ट्रिक गाडीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं। यदि बिजुली उत्पादन जीवाश्म ईन्धनबाट आउँछ भने, यो यसको सिर्जनामा ​​प्रदूषित हुनेछ, तर यसको प्रयोगमा होइन। यद्यपि, यदि ऊर्जा स्रोत नवीकरणीयबाट आउँछ भने, गाडी शून्य उत्सर्जन हुनेछ।
सर्ट्रान्स र इकमोबिलिटी
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, यातायातको गतिशीलताले शहरको प्रदूषक उत्सर्जनको %०% ओगटेको छ। यही कारणले सेट्रान्सले वर्षौंसम्म दिगो फ्रेट यातायातमा लगानी गर्दैछ। यी बर्षहरूमा यसले कार्यहरू गर्दछ जुन यसका गतिविधिहरूको वातावरणीय प्रभाव कम गर्दछ।
ती मध्ये एक मार्गहरूको सही योजना हो। यातायात समय घटाउन, सेर्ट्रान्सले प्रश्नको सबैभन्दा छोटो मार्गको योजना बनायो किलोमिटरमा मात्र होइन, तर CO2 उत्सर्जनमा। ड्राइभरहरूले नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दै छन् र अन्य ड्राइभरहरूद्वारा प्रदान गरिएको सुधारहरू प्रयोग गर्दैछन्। यस तरिकाले, यातायात दूरी कम छ।
अर्को कार्य हो भारको अनुकूलन। यातायात ट्रकहरू ठूला हुन्छन् र अधिक कार्गो एकैचोटि समात्न सक्छन्। यससँग, यात्राहरूको संख्या घटाउन सकिन्छ र स्थायित्व लक्ष्यहरू नजिक।
अन्तमा, सेर्ट्रान्स बीचमा यातायात बढेको छ। यो कम प्रदूषण गर्न अन्य प्रकारको यातायातको साथ भूमि यातायातको संयोजन हो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, आज कम्युनिबिलिटी एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो सार्वजनिक यातायात र साइकलको प्रयोगमा मात्र आधारित छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » के हो र ईमोबिलिटी कती महत्त्वपूर्ण छ